RASMI: Quique Setien Oo Ku Dhawaaqay Liiska Barcelona Ee Kulanka Napoli, Saddex Xiddig Oo Maqan & Khadka Dhexe Oo Musiibo Ka Taagan Tahay - Gool24.Net
RASMI: Quique Setien Oo Ku Dhawaaqay Liiska Barcelona Ee Kulanka Napoli, Saddex Xiddig Oo Maqan & Khadka Dhexe Oo Musiibo Ka Taagan Tahay
Tababaraha kooxda Barcelona ee Quique Setien ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqay liiska xiddigaha kooxdiisa ee kulanka ay habeen dambe gegida Camp Nou kusoo dhawayn doonaan kooxda ree Talyaani ee Napoli kulanka lugta labaad ee wareega 16-ka Champions League.
Kulankii hore ayay labada kooxood kusoo kala baxeen bar-bardhac min 1 gool ah iyadoo kooxda caawa adkaataa ay tigidhkeeda u goosan doonto wareega siddeed dhammaadka ee ka qabsoomaya dalka Portugal.
Tababare Setien ayaa qaba wer-wero xoogan kahor kulanka caawa maadaama oo uu hubaal waayi doono adeega xiddigaha khadka dhexe ee Sergio Busquets iyo Arturo Vidal oo labaduba dhaawac ku maqnaan doona.
Garabka weerar ee Ousmane Dembele oo uu shaki ku jiray kulankan kaddib dhaawac mudo dheer ah oo uu kasoo laabtay ayaan kusoo bixin liiskan si lamid ah Samuel Umtiti iyo Todibo.
Sidoo kale waxa uu Setien gabi ahaanba ka reebay liiska xiddigaha uu kulankan soo xushay khadka dhexe ee ree Brazil ee Arthur Melo kaas oo ay isku dhacsan yihiin kooxda kaddib markii uu diiday inuu kooxda ku laabto iyadoo dhawaan laga iibiyay Juventus.
Walow heshiiska Arthur ee Barca uusan wali dhicin haddana xiddigan ayaa diiday inuu ku laabto tababarka, maqnaanshihiisa oo lagu daray maqnaanshaha Busquets iyo Vidal ayaa musiibo ka dhigaysa khadka dhexe ee Blaugrana.
Ugu damayn, Antoine Greizmann ayaa kusoo laabtay liiskan kaddib dhaawac dhawaan gaadhay, sidoo kale daafacyada dhexe ee Ronald Araujo iyo Clement Lenglet.